Ka bogo 11-ka kabiir ee ka maqnaanaya Koobka Euro 2016 – Gool FM
Ka bogo 11-ka kabiir ee ka maqnaanaya Koobka Euro 2016
Raage May 30, 2016
(Zurich) 30 Maajo 2016 – Waxaa waqti aan badnayni uu ka haray bilaabashada Koobka Qaramada Yurub oo ka furmaya dalka Faransiiska.
Waxaa haddaba sanadkan Euro 2016 ka maqnaan doona xiddigo looga bartay inay kasoo muuqdaan iyo kuwo loo badinayey inay markan kasoo muuqan doonaan.
Xiddigahan oo xulal kala duwan u safan jirey ama u safta ayaa Euro ku seegaya sababo kala geddisan, qaar baan loo yeerin, qaar baa ganaax ku seegaya, halka qaar kale uu calafkoodu seejiyey oo ay koobka ka dhaawacmeen.
Haddaba, hoos ka eeg 11-ka xiddig ee ugu culus laacibiinta sanadkan laga tebi doono tartanka Euro 2016.
Marco Veratti (Italy)
XIDDIGO XUSID MUDAN MISNA MAQAN
Markii 11-kan laga yimaaddo sidoo kale waxaa jira laacibiin kale oo mudan in la xuso waxaana ka mid ah: Fernando Torres (Spaain, looma yeerin), Aymeric Laporte (France, dhaawac), Claudio Marchisio (Italy, dhaawac), Paco Alcacer (Spain, looma yeerin), Juan Mata (Spain, looma yeerin), Fabio Coentrao (Portugal, dhaawac).
Sidoo kale waxaa maqnaan doona garab-weerarka Arjen Robben oo u safta Holland, kaasoo tiiyoo ay jirto in sanadkan la ballaariyey Euro 2016 misna ka haray tartanka.
Ever Banega oo markii ugu horreeysey ka hadlay u wareegistiisa Inter Milan
TOOS u daawo: France vs Cameroon - LIVE